“Ma jiro qof iga koobab badan xilli ciyaareedkan” – Jorginho oo ka hadlay Abaal-marinta Ballon d’Or – Gool FM
(Yurub) 13 Luulyo 2021. Taageerayaal badan oo Talyaani ah ayaa dalbaday in xiddiga Azzurri ee Jorginho la siiyo abaal-marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or sanadkan, sababa la xariira wacdarradii uu ka sameeyay kooxdiisa Chelsea iyo xulkiisa.
Jorginho iyo saaxiibkiis Emerson Palmieri waxay awoodeen inay kula guuleystaan ​​Talyaaniga koobkii Qaramada Yurub ee Euro 2020, wax ka yar laba bilood kaddib markii ay Chelsea la qaadeen koobka Champions League.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Jorginho, wuxuuna yiri:
“Waxaan ku noolnahay riyooyin, laakiin haddii aan si daacadnimo u hadlo, waxay ku xirantahay heerarka la dejiyay.”
“Haddii aan ka hadlayno xirfad, waxaan ka warqabaa inaanan ahayn kan ugu fiican adduunka, laakiin dhanka kale haddii xulashada ay ku saleysan tahay koobab, ma jiro qof ku guuleystay koobab ka badan inta aan aniga ku guuleytay.”
Khadka dhexe xulka qaranka Talyaaniga iyo kooxda Chelsea oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaas ku daray:
“Sideen isugu bar-bardhigi karaa Messi, Cristiano Ronaldo ama Neymar? waxay leeyihiin dabeecado gabi ahaanba iga duwan, laakiin waxaan ku celinayaa inay ku xiran tahay shuruudaha.”
Paris Saint-Germain oo ugu dambeyn isaga hartay doonista Lionel Messi... (Maxay u sabab ah?)